अबको ४ दिन पछि भारतमा हवाई उडान फेरि संचालनमा आउदै के हुन्छ अब ? पूरा प ढ्नुस – DIVAKHABAR.COM
अबको ४ दिन पछि भारतमा हवाई उडान फेरि संचालनमा आउदै के हुन्छ अब ? पूरा प ढ्नुस
भारतले आगामी मे २५ देखि आन्तरिक हवाइ उडानहरु पुनः शुरु गर्ने भएको छ । भारतका नागरिक उड्डयन मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले एक ट्वीट जारी गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन्।
‘सबै विमानस्थलहरु र विमान कम्पनीहरुलाई मे २५ देखि आफ्नो कार्य सुचारु गर्न सूचित गरिसकिएको छ,’ उ
नले आफ्नो ट्वीटमा भनेका छन् । रातोपाटीबाट
लकडाउनका कारण यो समय प्रायः मानिसहरु कम्प्युटर, ल्यापटम, मोबाइल र टिभीमा लामो समय व्यतित गरिरहेका छन् । यसरी लगातार स्क्रीनको अगाडि बस्दा आँखामा नराम्रो असर पर्छ ।
जसको कारण कालो धब्बा देखिने जस्ता समस्याहरु पैदा हुन्छन् । यसका साथै आँखा थकित हुन्छ । आँखालाई यस्तो अवस्थामा सुरक्षित राख्न के गर्ने ?
चियाको पातमा क्याफिनको मात्रा धेरै पाइन्छ । यसले आँखा सुन्निएको कम गर्छ । र आँखामा रक्तसञ्चार गराउँन मद्दत गर्छ । त्यसैले टि ब्यागलाई चिसो बनाउन फ्रिजमा राख्नुहोस् र ५ मिनेटसम्म आँखामाथि राखेर बस्नुहोस्
नरिवलको तेलले आँखाको वरिपरिको कालो भाग, सुख्खापन र सुन्निनबाट बचाउँछ । त्यसैले आँखाको तल्लो भागमा दुई थोपा नरिवलको तेल राख्नुस् र हल्का मसाज गर्नुस् आँखा वरिपरि । यो राति सुत्नुअघि गरिने उपाय हो । र बिहान धुनुहोस्
आलुमा पाइने इन्जाइमले आँखाको कालो धब्बा हटाउन निकै मद्दत गर्छ । आलुलाई लेदो बनाएर ३० मिनेटसम्म फ्रिजमा राखेपछि आँखाको पूरै भागमा लगाएर २०/२५ मिनेट सम्म राख्ने र पानीले पखाल्ने अनि आँखा तेजिलो रहन्छ मजबुत रहन्छ । सक्दो से यर गर्नुस ।
Previous भारतले भन्यो नेपालले बनाएको नयाँ नक्सा हामिले मान्ने वाला छैनौं
Next भनेको नमान्दा पतिमाथि उ म्लेको पानी खन्या उदा यस्तो भयो